लोकतन्त्र र गणतन्त्रको ठूलो संवाहक कम्युनिष्ट पार्टी हुन्ः नेता नेपाल - Everest Dainik - News from Nepal
लोकतन्त्र र गणतन्त्रको ठूलो संवाहक कम्युनिष्ट पार्टी हुन्ः नेता नेपाल
काठमाडौं, साउन १७ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको कार्यभार कम्युनिष्ट पार्टीको काँधमा आएको बताएका छन् । बरिष्ठ नेता नेपालले सरकारभित्र र बाहिरका नेकपाको कार्यकर्ताले कुशलता र योग्यतासाथ इतिहासले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने बताए ।
उनले तुल्सीलाल अमात्यको को २२ औं स्मृति दिवसमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा भने, ‘कुशल नेतृत्वको लागि व्यवस्थापकीय क्षमता चाहिन्छ, कतिपयमा यसको कमी देखिन्छ ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले दक्षता, कुशलता र व्यवस्थापकीय क्षमताविना अब्बल कार्य गर्न नसकिने बताए ।
याे पनि पढ्नुस नेकपा र फोरमबीच दुई बुँदें सहमति, अब उपेन्द्र यादव सरकारमा जाने
उनले भनृ, “केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सेवामा व्यवहारबाट अग्रणी र अब्बल बन्नैपर्छ । अनुगमन, मूल्याङ्कन र पुरस्कृत गर्ने क्रममा पनि हाम्रो कुशलता र दक्षता देखिनुपर्छ ।” उनले भएकाले यसका बिरुद्धका कुनै पनि षड्यन्त्र सफल नहुने स्पष्ट पारे । नेता नेपालले तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा च्यासलस्थित प्रतिष्ठानको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा तुल्सीलाल ‘ऊर्जावान व्यक्तित्व’ भएको टिप्पणी गरे ।
याे पनि पढ्नुस ओली र नेपालबीच २८ दिनपछि भेटवार्ता, ४ घन्टामा के विषयमा भयो छलफल?
उनले तुल्सीलालको संगठन कुशलता र जनतासँग एकाकार हुनसक्ने क्षमताको उच्चप्रसंसा गर्दै भने, “रौतहटमा कार्यक्षेत्र बनाएर सामन्तवाद बिरुद्ध किसानमा चेतना र जागरणको बिद्रोही झण्डा उठाउनुभयो ।” नेता नेपालले मधेशका श्रमिक र किसानले सामन्तवादी संस्कृतिबिरुद्ध तुल्सीलालकै नेतृत्वमा ‘रे’ नही ‘जी’ कहो आन्दोलन गरेको स्मरण गरे । २०४६ सालको आन्दोलनमा पञ्चायती व्यवस्थाबिरुद्ध कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डा लिएर सडकमा एक्लै निक्लिएको प्रसङ्ग चर्चा गर्दै नेता नेपालले भने, “तुल्सीलाल एक निर्भिक नेता थिए ।”
याे पनि पढ्नुस नेकपा सचिवालय बैठक बालुवाटारमा सुरू, के विषयमा हुँदैछ छलफल?
कार्यक्रममा बरिष्ठ साहित्यकार मदनमणि दीक्षित, बरिष्ठ लेखक भैरव रिसाल, बरिष्ठ साहित्यकार मोदनाथ प्रश्रितलाई सम्मान गरिएको थियो । कृष्णदास श्रेष्ठलाई समेत मरणोपरान्त सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा तुल्सीलाल स्मृति दिवसको सन्दर्भमा ललितपुर जिल्ला स्तरीय हाजिरी जवाफ प्रतियोगिताका विजयीहरुलाई सांसद पम्फा भुसालले पुरस्कार प्रदान गरेकी थिइन् ।
ट्याग्स: कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरण घोषणा, माधवकुमार नेपाल